Real-Nguva Kutaurirana: Chii chinonzi WebRTC? | Martech Zone
Yechokwadi-yenguva yekutaurirana iri kuchinja mashandisiro ari kuita makambani avo kuvepo kwewebhu kuita zvine mutsindo kudyidzana netarisiro uye vatengi.
Chii chinonzi WebRTC?
Webhu Chaiyo-YeNguva Kukurukurirana (WebRTC) muunganidzwa wematanho ekutaurirana uye maAPI ekutanga akagadzirwa neGoogle iyo inogonesa chaiyo-nguva izwi uye vhidhiyo kutaurirana pamusoro pezera-kune-vezera kubatana. WebRTC inobvumira mabhurawuza ewebhu kukumbira chaiyo-nguva ruzivo kubva kumabhurawuza evamwe vashandisi, zvichigonesa chaiyo-nguva vezera-kune-vezera uye kukurukurirana kweboka kusanganisira izwi, vhidhiyo, chat, kufambisa faira, uye kugovana skrini.
Twilio - Chii chinonzi WebRTC?
WebRTC iri kwese kwese.
Musika wepasi rose WebRTC yaive $ 1.669 bhiriyoni USD mu2018 uye inotarisirwa kusvika $ 21.023 bhiriyoni USD pasirese na2025.
Ziyoni Sika Kutsvaga
Makore apfuura, WebRTC yakatanga seVoIP protocol Provider inonongedza mabhurawuza ewebhu. Nhasi, hapana browser rinotenderera odhiyo / vhidhiyo isina WebRTC kuitiswa. Nepo pano pane vamwe vatengesi vanotenda kuti WebRTC yakundikana kurarama zvinoenderana nezvavanotarisira, pamwe ndivo vatengesi vakatadza kushandisa WebRTC kukwidziridza ruzivo rwevashandisi vepamusoro.
WebRTC ndeyekusimudzira nhaurwa dzechokwadi-nguva kuburikidza newebhusaiti. Munguva pfupi yapfuura, Google yakaburitsa Chrome inobata anopfuura 1.5 bhiriyoni evhiki evhidhiyo odhiyo / vhidhiyo mumaminetsi. Ndizvozvo Mamiriyoni 214 maminitsi pazuva. Uye izvo zviri muChannel chete! Heano kutarisa kwakadzama kweanogona kuwanikwa achishandisa WebRTC.
Chii Chaicho-Nguva Kukurukurirana Kunowanikwa neWebRTC?
Kugovera Screen - Wana zvakanyanya kubva mukubatana nevamwe vashandisi ipapo. WebRTC 'Android / iOS vhidhiyo yekutaurirana application inogonesa kugovaniswa kwescreen kure neimwe kifaa kana mushandisi nekukodzera kuwana. NeWebRTC inoratidzira, Yemazuva ano kubatana kwakabatana kuri kusimbiswa nevaviri vevanotungamira ekukurukurirana chikuva vanopa kureva Skype& Mirrorfly. Screen yekugovana ficha inovandudza iyo yese bhizinesi kubatana kune rinotevera-nhanho uko musangano-wakavakirwa musangano unoita ayo akakosha mabasa. Kubva pakukurukurirana kusvika kumharidzo, mawebhu webhu kumisangano, kugovana skrini kwave kuri pakati.
Multi-mushandisi Vhidhiyo Musangano - Musangano wevhidhiyo wakasarudzika wevashandisi unoda kuwanda kwekubata matani evashandisi panguva imwe chete, ndipo panotangira WebRTC webhu yekutamba. WebRTC inoratidzira sevha inobvumidza kugadzira chaiyo-nguva uye inotsvedza mapato-mapato vhidhiyo uye kufona kwenzwi pasi rose. WebRTC vhidhiyo nezwi kufona zvinoda hushoma huwandu hwenhepfenyuro kuteedzera vese vatori vechikamu mune yakawanda-bato vhidhiyo kufona. WebRTC vhidhiyo yekufona app inoyerera iyo yakawanda-bato kubatanidza kuburikidza neMCUs (Multipoint control mayuniti) uye maSFUs (Sarudzo yekuendesa mberi zvikamu)
Kubatana paZororo - Mazuva iwawo pawaisayina-muakaundi, tora kurodha papuratifomu uye nekuisa mapuratifomu akati wandei kuti ungobatana nemumwe mushandisi kuti utaure. Iine WebRTC izwi uye vhidhiyo yekutaura server, hapasisina maitiro echinyakare. WebRTC mameseji ehurukuro inoita kuti ive nyore uye yakapusa kuona kubatana mushe. Yechokwadi-yenguva kubatanidzwa kunoitwa nyore pamapuratifomu akagadzwa neWebRTC mabhurawuza anotsigirwa.
Faira Kugovana - Kufambisa kwedata hombe kwagara kuri chiito chakaomarara uye chinonetsa apo izvi zvinotungamira vashandisi kuchinjira kumamwe maficha senge Email kana kutyaira. Maitiro ekuchinjisa dhata haana nyore kudaro, zvakapedza nguva yakawanda, simba uye data. Iine WebRTC inoratidzira server, inoderedza maitiro nekurega ichiitumira yakananga kuburikidza newebhusaiti yakamisikidzwa ne vhidhiyo kufona API. Uyezve, WebRTC inoregedza kuendesa mafaera mune ye Ultra-yakaderera latency chero iyo bandwidth. Pamusoro payo, WebRTC inotumira data pasi peimwe yakachengeteka padenga.
Yakawanda-yakachengeteka Vhidhiyo & Izwi Kutaurirana - WebRTC Inoratidzira WebSocket inopa yakasimba RTP protocol (SRTP) iyo inovhara iyo yese WebRTC 'boka reruzha rukurukuriro rwunotapurirana paApple, iOS & web maapp. Zvakare, inogadzira kutendeseka kwekutaurirana pamusoro peWifi kuchengetedza runhare kubva kune isingadiwe kuwana uye kurekodha mafoni.
Yechokwadi-nguva masevhisi ehupenyu Kurarama - WebRTC ine mukana wekubatanidza nechero application kuti uwane hurukuro yekurarama mumatunhu ese. Iyo WebRTC zvivakwa & vhidhiyo yekukurukura SDK inogadzira yakananga nzira yekuita mhenyu kutaurirana chero iyo indasitiri, kubva kushambadziro, ecommerce, hutano hutano, vatengi rutsigiro, inopa chaiyo-nguva yekutaurirana masevhisi.
Yakadzika Latency Networking - Vhidhiyo Yekufona API pamwe neWebRTC kusangana inogonesa kugovana dhata yakanangana nechero chishandiso kana chishandiso pasina kupinda mune akateedzana emaseva. Iyo yepakati-bhurawuza yekuwana inojekesa iyo data kuyerera uye inobatsira kutapurirana mune yakaderera latency network. WebRTC yakagonesa chat application ruzivo rwekuyerera kukuru kwemeseji uye mafaera kune chimwe chikumbiro zvisinei nebandwidth iyo webhusaiti inayo.
Iyo WebRTC Vhidhiyo Yekufona uchishandisa Node.js
Sanganisa WebRTC Uchishandisa MirrorFly
Unoda kutanga nhasi? Tarisa uone MirrorFly Yechokwadi-Nguva Chat API. NeChat API yavo, unogona kuvaka kuvaka akasiyana-siyana mameseji maapplication uchishandisa akasiyana maficha uye mashandiro. Ivo vanopa chaiyo-nguva API yewebhu kunyorera uye SDK yeApple uye iOS nhare yekushandisa.
Tags: Google +-Chaicho nguvartcscreensharingsdkvideo conferenceweesrec
Sienna muverengi anoshingairira, munyori ane shungu, bhaisikopo bhaisikopo, mumwe nemumwe uye zvimwe zvakawanda. Ini ndinoda kunyora nezve tekinoroji uye kuti zvinokwana sei muhupenyu hwako hwezuva nezuva.
Iterable: Muchinjikwa-Chiteshi Kukura Kushambadzira Platform